Video: Kumanaan Katirsan Muslimiinta Rohingga Oo Wali Lagu Xasuuqayo Wadanka Baarma.
Tuesday September 05, 2017 - 12:38:46 in Wararka by Super Admin
Wadanka Baarma ee dhaca Koonfurta Qaaradda Asia waxaa wali kasii socda xasuuq bahalnimo ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta laga tira badanyahay.
Wararka ka imaanaya gobolka Araakan ee muslimiintu leeyihiin waxay sheegayaan in xasuuq daran ay la kulmayaan dadka muslimiinta ah, dowladda Baarma ayaa kumanaan katirsan ciidamadeeda ku fasaxday tuulooyin iyo magaalooyin ay deganyihiin dad shacab ah halkaas oo ay ka geysanayaan xasuuq waxashnimo ah.
Hay’adaha sheegta xuquuqul insaanka waxay sheegeen in 5 maalmood gudahood ay ciidamada Melleteriga iyo Buudiyiin Mushrikiin ah dileen dad ka badan 2000 oo qof.
Muuqaallo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay ciidamada melleteriga oo rasaas madaxa uga rusheynaya dad shacab ah sida haween,carruur iyo dad waayeella ah.
Haweenayda madaxda ka ah wadanka Baarma Un San Suu Kyi ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay wadaan howlgal ka dhan ah wax ay ugu yeertay Argagaxiso, waxaa xusid mudan iyo Uns Suu ay abaal marin caalami ah ku heshay arrimaha nabadda iyo ququuqul insaanka sidaas daraadeed ay u xasuuqeyso dad muslimiin abriyo ah.
Daahir Al-araakaani oo kasoo jeedo qowmiyadda Rohinga ayaa warbaahinta u sheegay in xasuuq safmareen ah ay wali wajahayaan muslimiinta Araakaana wuxuuna ku eedeeyay dhammaan waxa loogu yeero beesha caalamka in ay ka gaabiyeen ugurmashada dadka la gumaadayo.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in maalmihii Ciidda gobolka Araakaan lagu dilay 3,000 oo shacab ah, dowladda Banghaladeesh oo daris la ah Baarma ayaa ku dhawaaqday in ay xirtay xuduudda islamarkaana ay dib ucelinayso dadka kasoo cararaya jaxiimada adduunka.